प्रेरक प्रशंङ्ग : शत्रुलाई पनि मित्र कसरी बनाउने ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रेरक प्रशंङ्ग : शत्रुलाई पनि मित्र कसरी बनाउने ?
पुस २८ गते, २०७६ - १२:२५
काठमाडाैं । एक राजाको सपनामा एक साधुले भने– महाराज, अमुक स्थानको रूखको टोड्कामा बस्ने एउटा सर्पले अघिल्लो जन्मको बदला लिन भोलि राति तपाईंलाई डस्नेछ । सावधान रहनुहोला । बिहान बिउँझिएपछि राजा आफूलाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा सोचमग्न भए । सोच्दासोच्दै उनी मिठो व्यवहारबाट शत्रुको मन जित्ने सोचमा पुगे ।
उसले राजालाई भन्यो— महाराज, म तिमीलाई डसेर पूर्वजन्मको बदला लिन आएको हुँ । तर, तिमीले ममाथि देखाएको स्नेहभावले गर्दा अब म तिम्रो शत्रु होइन, मित्र बनेको छु । म मित्रताको चिनोस्वरूप आफ्नो मणि तिमीलाई दिन चाहन्छु । यसलाई स्वीकार गर । यति भनेर सो सर्प नागमणि राजालाई दिएर आफ्नो वासस्थानतिर फर्कियो । नयाँ पत्रिकाबाट
पुस २८ गते, २०७६ - १२:२५ मा प्रकाशित